Akhriso: Dembiyadda ku saleysan falka jinsiga oo ku soo badanaya Soomaaliya iyo sababta kordhisay? – Kalfadhi
January 26, 2021 January 26, 2021 Hassan Istiila
Dr Maxamed Xuseen Liibaan, oo kamid ah ururadda bulshada rayidka, ayaa xusay in wakhtiyadii lasoo dhaafay ay aad usoo bateen dembiyadda falka jinsiga ku saleysan, iyadoona ay kordheen dembiyada iyo dadka imaanaya maxaakiimta kala duwan ee dalka.
Dr Liibaan, ayaa todobaadkii hore ka qeyb-galay madal ay Somali Public Agenda oo taageero ka heleysa IMS, interpeace iyo platform-ka Kalfadhi kusoo bandhigeysay, falanqeyn is-bar-bar-dhigid ah oo ku saabsan hindise-sharciyeedyada Dembiyada Jinsiga ee Soomaaliya, kaas oo doodo xooggan ka dhex abuuray bulshada iyo Baarlamaanka dalka.
“Qoraalo badan oo caalami ah iyo cilmi-baarisyo inta waa la sameeyay, oo waxaa la leeyahay tirada dacwadaha maxaakiimta timaado wey kordheen. Inta aan annaga ka warqabno ee aanba aheyn baaritaano ayaa aad u badan” ayuu yiri.
Dr Liibaan, ayaa intaasi ku daray in dadka qaar ay ku fasirayaan sababaha badiyay dembiyada in ay yihiin, isticmaalka baraha bulshada oo soo kordhay iyo drugs badan oo dalka soo galay.
Laba hindise-sharciyeed oo aad u kala duwan, isla markaana ka hadlaya Dembiyada Jinsiga oo ay soo kala saareen Golaha Shacabka iyo Wasaaradda Haweenka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa keenay in dadka ay ku jahwareeraan, isla markaanna ay ka dhasheen su’aalo dhowr ah.
Shirka istaraatiijiyada Guddiga Doorashooyinka ee 5-ta sanno ee soo socota oo ka socda Mogadishu